Shina : Androany no entina eny amin’ny fitsarana ilay raharaha namonoana mpitandro filaminana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Aogositra 2008 10:40 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Português, македонски, Español, English
Androany no hatao ny fitsarana an'i Yang Jia, rehefa nahemotra noho ny lalao olympika. Niditra tao amin'ny tobin'ny mpitandro filaminana ao Shangai izy tamin'ny volana iny, ary namono mpitandro filaminana 6. Araka ny voalaza dia noho ny tsy fahamarinana nataon'ireo mpitandro filaminana sy ny herisetra nataon'izy ireo tamin'ny Yang Jia no nahatonga azy nanao izao fihetsika izao. Nankasitrahan‘ny olona maro amin'ny aterineto moa izao fihetsiny izao, ary toy ny olo-malaza [Hero] no nandraisana azy.
Talata tolakandro ao Shina, ary miandry ny voka-pitsarana izay tsy fantatra raha hivoaka androany akory ny mpitoraka blaogy maro. Tsy tena malalaka moa ny fanoratana mikasika ity raharaha ity araka ny nasehon'ny mpahay lalana sady mpitoraka blaogy Liu Xiaoyuan ao amin'ny Sina Blog : ‘Misy sakantsakana amin'ireo lahatsoratra mikasika ny raharaha Yan Jia amin'ny blaogy.’
Nisy mpanao gazety avy any ivelany nametraka fanontaniana maromaro tamiko omaly. Ny fahalalahan'ny fanaovan-gazety sy ny fahalalahana maneho hevitra nandritra ny lalao Olympika moa no tian'izy ireo ho fantatra. Tsy nosakanan'ny manam-pahefana ny tranokalan'ireo fampitam-baovao avy any ivelaany nandritra ny lalao Olympika, ary azo natao izany ny namaky azy ireny. Dingana lehibe izany. Vao maika miha-hentitra nefa ny fanaraha-maso ireo lahatsoratra amin'ny aterineto. Maro ny zavatra tsy azo resahina, ary ny lahatsoratra tahaka ity aza dia ho voafafa.
Tsy nampoiziko mihitsy hoe na dia efa vita aza ny lalao Olympika dia mbola voasakantsakana ihany ny fahafahana miteny amin'ny aterineto. Raha vao naheno aho tamin'ny alina fa androany no ho entina eny amin'ny fitsarana ilay raharaha Yang Jia dia napetrako tamin'ny blaogiko rehetra izany. Ny sasany tamin'izy ireo moa, tahaka ny mahazatra, dia tsy namela ahy hamoaka ny lahatsoratra. Ny ady hevitra nosokafako ao amin'ny Cat898 BBS ? Nakatona ka tsy misy afaka mamaly.
Nakatoka koa ny ady hevitra iray hafa nataoko androany maraina, mikasika ny raharaha Yang Jian, hany ka tsy afaka mametraka hevitra na mamaly ny mpamaky.
Androany tolakandro dia nandefa hafatra tamin'ny namako iray ao amin'ny Bokee aho, nanantena fa ho afaka asehon'izy ireo ny lahatsoratro. “Nahoana no tsy navoakan'ny Intermediate Court ao Shangai amin'ny aterineto ny vaovao mikasika ny fitsarana an'i Yan Jia.” Namaly moa izy hoe ‘Misy baiko.’ Namaly indray aho, nanontany hoe : “Baiko efa taloha ve, sa baiko vao izao ?” dia namaly indray izy fa f: ‘Ny baiko taloha mbola eo, art misy baiko vavao koa.’
Nisy namaly tamin'ny lahatsoratro tao ami'ny BBS, fa raha mandeha eto ianao dia tsy misokatra io.
Efa nomanina taloha daholo izao, araka ny nolazain'ny mpilaza vaovao avy ao amin'ny Caijing.
Nisy olona tsy nilaza anarana nametraka hevitra tao amin'ny lahatsoratry Liu :
Ny tsy famelana ny olona hiteny dia tena maneho mihitsy fa misy zavatra afenin'izy ireo ao.